Xog: Qorshe xilka looga qaadayo Xasan oo socda iyo siyaasiga lagu beddelayo |
Xog: Qorshe xilka looga qaadayo Xasan oo socda iyo siyaasiga lagu beddelayo
Waxaa aad u socda qorshe xooggan oo la doonayo in xilka looga qaado madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, si loo bad-baadiyo qaranka oo halis xooggan ugu jira isaga iyo dhowr qof oo saaxiib la ah.
Qorshahan ayaa helay taageero weyn markii kutlad cusub oo xildhibaanno ah una badan kuwa Hawiye ay ku biireen 80 xildhibaan oo horey ugu guntaday bad-baadinta qaranka. Xildhibaanada ayaa hadda waxa ay gaarayaan 153, waxaana ay u baahan yihiin kaliya 27 kale, si Xasan Sheekh dalka looga bad-baadiyo.
58 ka mid ah Xildhibaanada Beesha Hawiye ayaa kudlooyinka mucaaradka ee Baarlamaanka Federalka Somalia u gudbiyay in Cabduqaadir Cosoble Cali uu beddeli doona Xasan Sheekh, marka xilka laga qaado.
Xasan oo lagu beddelayo Cosoble
Xogtaan waxaan ka helnay qaar ka mida Xildhibaanada Beesha Hawiye ee habeen hore ku shiray guriga Xildhibaan Cabdullahi Goodax Barre.
Xildhibaanada labada Kutla ayaa isku raacay iney wejiga koowaad ku ridaan Xukumadda Ra’isul wasaare Cumar Cabdirashiid kadibna u jeestaan sidii xilka qaadis loogu sameeyn lahaa Madaxweyne Xasan oo qaranimadda Somalia ka doortay afar ka tirsan Kaadiriinta Urur diimeedka Damujadiid.
Ninka la isku raacay inuu ku fariista kursiga madaxweynenimada inta laga gaaraa doorashada 2016, wuxuu u dhashay qabiilka Hawiye gaar ahaan Abgaal, waana ganacsade ka mida kuwa ugu taajirsan Muqdisho.
Xildhibaanada saxiixay mooshinka ridista xukumadda lagu dhawaaqay waxeey gaarayaan 153 Xildhibaan, waxaana la filayaa inay ku dhaqaaqaan qorshaha cusub. Waxaa sidoo kale qorshaha si hoose u taageersan guddoomiyaha baarlamanka Jaawaari, taasi oo fududeyn karta hir-gelintiisa.
Urur diimeedka Aala Sheekh oo dhawaan Muqdisho ka sameeystay Xisbi loogu magacdaray Daljir ayaa laftooda gacan weyn oo dhaqaale ka geysanaya sidii loo ridi lahaa Cumar Cabdirashiid iyo Madaxweyne Xasan.
Aala Sheekh, waxa ay inta badan gacanta ku hayaan ama ay taageero ka haystaan ganacsatada Muqdisho.
Sikastaba ha ahaatee, Hadii ridista Xukumadda cusub kadib lagu guuleeysto in xil ka xayuubin lagu sameeyo Xasan Sheekh, waxaa xilkaas loo dooran doonaa Xildhibaan Cabduqaadir Cosoble oo talada sii heeyn doono, inta laga gaaraa doorashadda 2016.